कुवेत पुगेकि चेली भन्छिन्- ‘नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्ला भन्दा लभ पो गरम भन्छन’ ! « गोर्खाली खबर डटकम
के तपाईको छाती दुख्छ ? कतै तपाईलाई यस्तो रोग त लागेको छैन ?
६० मिनेट अगाडी
२०७८ मङ्सिर १६ गते बिहिवार प्रकाशित
विदेशबाट फर्केकी आमाजु दिदीले कुवेतमा काम राम्रो छ भनेपछि पार्वतीले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । पार्वतीका तीन जना जेठानी देउरानी त अहिले पनि विदेशमा छन् ।
त्यसैले उहाँले रोजगारीका लागि विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो । छनलाई पार्वती र उहाँका श्रीमान् मुकुन्द अधिकारीको त्यति धेरै ऋण पनि थिएन । जग्गा बन्धकीमा राखेको ४० हजार रुपैयाँ तिर्नु थियो ।”
सिप नलागेपछि मुकुन्दले दिदीको भर परेर श्रीमतीलाई विदेश जाने अनुमती दिनुभयो । तीस हजार रुपैयाँ तिरेर पार्वती कुवेत
अर्काको बच्चा च्यापेर नेपाल–भारत सिमाना पार… आमाजु दिदीले सहयोग गरेपछि पार्वतीले श्रीमान्लाई नै थाहा नदिई पासपोर्ट बनाउनुभयो । विदेश हिँड्ने बेलामा मुकुन्दले उहाँलाई रोक्ने थुप्रै प्रयास गर्नुभयो । तर केही सिप नलागेपछि मुकुन्दले दिदीको भर परेर श्रीमतीलाई विदेश जाने अनुमती दिनुभयो । तीस हजार रुपैयाँ तिरेर पार्वती कुवेत पुग्नुभयो ।”
तर त्यहाँ पुग्न आमाजु दिदीले भने जस्तो सजिलो थिएन । अवैधानिक रुपमा भारतको बाटो हुँदै उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको हो । पार्वतीसित अरु दुईजना महिला पनि थिए । नेपाल–भारतको सिमाना काटेर दिल्ली पुग्न दलालले अनेक प्रपञ्च रचेका थिए । त्यसबेलाको कुरा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘आफ्नो हो भन्दै अर्काको बच्चा च्यापेर बोर्डर पास भयौं । लुम्बिनी घुम्न आएको भनेर पुलिसलाई ढाँट्यौं ।”
सिमाना पार गर्दा आइपर्ने झञ्झटबारे दलालले पहिल्यै उनीहरुलाई जानकारी गराएको थियो । ‘यहाँ प्रहरी हुन्छन भनेर पहिल्यै जानकारी दिन्छन् । दिल्ली पुगेपछि यसो गर्नु, उसो गर्नु भने सिकाएका थिए ।’दिल्लीमा एकरात बसेपछि अर्को दिन उनीहरु कुवेतका लागि उडे ।
तर त्यहाँ काम दिने घरमालिक उनीहरुलाई लिन तत्कालै आएनन् । पार्वतीले कुवेतको जेलिवस्थित एक घरमा मासिक ३५ दिनारमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो । एकवर्षपछि तलब बढेर ४० दिनार अर्थात १४ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।”
कुवेतमा घरको काम गर्न त सजिलै थियो, तर श्रीमान्, छोराहरु र परिवारको सम्झनाले धेरै चिमोट्थ्यो पार्वतीलाई । उहाँसित मोवाइल थिएन । श्रीमान र बुबाले फोन गर्दा पनि घरमालिकले बोल्न नदिने । घर बाहिर निस्कनुपर्दा पनि साहु साहुनीसँग मात्रै निस्कन पाइने ।
मालिकले नै नेपालमा पैसा पठाइदिने । तीन वर्ष कुवेतमा बसेर फर्कदा पार्वतीको हातमा अढाई लाख रुपैयाँ थियो । त्यो पैसाले ४० हजार रुपैयाँ ऋण तिरियो । अरु पैसा र छोराहरुको पढाई खर्चमा सकियो । विदेश हिँड्दा ६ र ७ वर्षे दुई छोरा अहिले ९ र १० वर्षका भए ।”
कुवेतको काम एक किसिमको जेल जस्तै थियो । परदेशमा आफ्नैले पनि सहयोग नगरेको अनुभव छ पार्वतीसित । ‘विदेशमा सबै नेपाली दाजुभाइ आफ्नै जस्ता लाग्छन् ।
तर उनीहरुले सहयोग गर्दैनन् । बरु लभ गरुँ भन्नेहरु पो धेरै थिए ।’बरु पार्वतीलाई लागेको छ, इमान्दार र लगनशिल हुँदा विदेशका घर मालिकले मन पराउँछन् । उहाँको बुझाईमा नेपालले कुवेतसित श्रम सम्झौता नगर्दा नेपाली कामदारले तलब सुविधा कम पाएका हुन् ।”
आज २०७८ वैशाख २ गते बिहीबारको राशिफल
ग्याष्ट्रिक अल्सर र कोलस्ट्रोल भएका बिरामीका लागि गुन्द्रुक खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा